Pane zvitatu zvatingaite kuti vanhu vakadai tinyavagadzirise sei? Chekutanga ndechekuti, ndinoona kuti zvingave avakanaka kuti tionewo kuti bumbiro rive nemutemo unoona kuti muParememde medu muvewo nemumwechete kana vazhinji vanomiririra vanhu vakaremara kana vane zvinovanetsa.
Chechipiri ndechekuti, ngatiwonewo kuti vanhu vechikadzi vanyatsopiwawo mukana wekutungamira muHurumende. Ngatiisei mubumbiro kuti vanhu ivava tivaitirewo zvakanaka nekukurumidza kuti vavewo pari nani. Yatingati nechirungu 'Affirmative Action', kwete yatinoinzwa vanhu vanoti dai ndatora makambani evanhu ave edu tichiti affirmative action, ihoho hundyire, haisi affirmative action.
Chechitatu ngationei kuti ma Institutions akaita sema "Anti-Discrimination Commission", nema "Gender Commission" atakambotaura aya, anokwanisa kuti atibatsire kunyatsotarisa kuti vanhu vanga vasingatariswe zvakanaka takwanisa kuti tivakadzirisirewo.
Hongu tinokwanisa kuenda kusarudzo kusina bumbiro idzva remitemo. Asi tinoona sekuti handizvo zvakatinakira, handizvo zvatinoda. Naizvozvo tinoda kuzoenda kusarudzo tava neBumbiro idzva emitemo rakanaka, tichikarira kuti rinenge riri Bumbiro rakasiyana neratiinaro nhasi, richava bumbiro rinonyatsoona kuti kana tichienda kusarudzo, tava kuenda kusarudzo kwete kuti tava kuenda kunorwa fanike zvakaitwa mazuva apfuura. Tinovimba kuti iBumbiro rinoti kana tapedza sarudzo tinonyatsoti tasarudza vanhu vatinoda kwete zvekuti tasarudza nekuti tamanikidzwa nangana. Ndiyo mhaka tiri kuti tiende kusarudzo tava nebumbiro idzva remitemo. Asi chikuru ndechekuti kunyangwe Bumbiro rakataura zvakanaka, isu vanhu tisati tashanduka mupfungwa, zvichatinetsa. Ngatitarise zvakaitika muna 2008, muna "March" zvakanga zvakanaka nerunyararo, paupenyu hwangu inguva yandakafarawo kuti ndakakwanisa kutaura nevanhu zvakanaka saMP. Asi tava kuzoenda kuna "June" masamba akanga asiyana, takaita sekunge taive mune imwe nyika isiri Zimbabwe asi hapana mutemo wakanga washanduka kubva muna "March" kusvika muna "June".
Tinozviziva zvakaitika kune nzvimbo zhinji, zvakaitika nekuti, vanhu vemuZimbabwe, iwo ma'Chef'' enyu iwaya, vanofunga kuti kana zvinhu zvakasaitika sezvavanoda hakusisina mutemo. Saka chinhu chikuru ndechekuti ngationei kuti tapa rukudzo kumutemo. Takaona pachibvumirano chakaitwa muna September 2008, chibvumirano ichocho chinotaura kuti, mapato ese anozvipira kuti munhu wese asununguke kuita zvaanoda nezve matongerwo enyika, mapato ose anofanira kuremekedza mutemo wenyika, uye kuti vanhu vedu vechipurira, chiuto nevamwe vanofanirwa kuita basa vachiti vari kuita basa reZimbabwe kwete kuti vari kuita basa remapato ezvematongerwo enyika. Zvinoreva kuti vanhu vese vanokarirwa kuti vagopa remekedzo kubumbiro remitemo. Saka parizvino tinotarisira kuti vanhu vashanduka maiitiro avo kuti tizoita sarudzo yatinogona kudada nayo.
Saka ngationei kuti kana tava kunyora Bumbiro redu remitemo tanyatsoongorora ipapa sezvo chisiri chinhu chakanaka kuti munhu mumwe chete agova ari iye chete anotungamirira ma "executive commissions" ose.
Handifunge kuti pane chakaipa kana mukuru weku "army" kana wemapurisa akati anoda zvake kuita zvematongerwo enyika. Zvandiri kutaura ndezvekuti kana mukuru wemauto kana wemapurisa achida kuvhotera zvake bato raanoda hazvina chakaipa, asi kana ava kuudza mauto ose kuti vhoterai uyu musingade kana muchida, kana kuti anotaura kuti kana nhingi akakunda musarudzo ini handisarute. Aiwa ikoko munoti kungava kuitawo here? Saka tiri kuti kana munhu ati anoda kuti aende kuneimwe nzvimbo anoita "Member of Parliament" zvakangonaka kuti munhu iyeya asiye zvake zvechipurisa, chiuto kana chi "Prison Service" oita zvamatongerwo enyika.